(၁၄-၂-၂၀၀၈ နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သော ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း သို့မဟုတ် စာရေးဆရာရေဆန် ... သို့)
(ဒေါင်းအိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၅)
သူ့ကိုဘယ်သူ သတ်သလဲ? တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဦးနှောက်ပါ။
သူ့ကိုဘယ်သူသတ်သလဲတဲ့ ၊ သိပ်သိချင်တယ်ပေါ့ ၊ သူ့ကို ကရင်ပဲသတ်ထာလေ မသိဘူးလား ၊ ဦးဝင်းကို ( ဝန်ကြီး ) နဲ့ ဦးကျော်မြ ကို ဦးတင်အောင် nld.la နဲ့ kia/kio သတ်တယ် ။ ဦးလှဖေ ( ဝန်ကြီး ) ကို ကရင်က သတ်တယ် ။ ဂျော်နီ ကိုလည်းကရင်ပဲ သတ်တယ် ။ ဖဒို မန်းရှာ ကိုလည်း ကရင်ပဲ သတ်တယ် နာမည်တွေသိချင်လား ၊ သိရင်ဘာလုပ်မလဲ သမိုင်းတင်ရုံသက်သက်လား ၊ပြောပါ ၊
သူက တမျိုးသာလုံးရဲ့ ဦးနှောက်ဆိုတော့ သူနှင့်အတူ တမျိုးသားလုံးရဲ့ ဦးနှောက်လည်းပါသွားပြီ လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ် ။ဒါဆို အဲဒီ တမျိုးသားလုံး ဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ ။အဲဒီလိုလား
တစ်ချိန်တုန်းက အမျိုးသားရေးကို ကိုယ်စားပြုပြီးဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် တစ်မျိုးသားလုံးကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တာကိုဆိုလိုတာပါ။ လောကမှာမရှိမဖြစ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။တစ်ယောက်သွားရင်တစ်ယောက်လာမှာပါ။အဲဒီတော့သူနဲ့အတူတော့တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဦးနှောက်ပါသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဦးနှောက်တစ်လုံးလျော့သွားတာပါ။
nothing special to do,just curious.
ဖဒို မန်းရှာကို သတ်တဲ့သူကို တကယ်သိချင်ပါသ လား ဗျာ။ သိသင့်ပါတယ်ဗျာ ။ NCUB က ကိုမောင်မောင် ကိုမေးကြည့်ရင်ရနိုင်ပါတယ် ။ ကိုမောင်မောင် ရဲ့ ဦး လေး တော်စပ်သူတယောက် KNU ဗဟိုကော်မတီထဲမှာရှိတယ် ၊သူ့ကိုမေးရင်လည်းရနိုင်ပါတယ်နော်
yep,perfect!Thanks & appreciate !